SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Yoruba Zulu
“Ndinofanirawo kuita zvinenge zvataurwa nevabereki vangu. Hapana chandinovavanzira. Ndinovaudza chero chavanenge vachida kuziva, uye izvozvo zvinoita kuti vavimbe neni uye vasanyanya kutarisa zvese zvese zvandinoita.”—Delia.
“Ndinofunga kuti vabereki vanoyeuka zvikanganiso zvavakamboita, saka vanenge vasingadi kuti vana vavo vari kuyaruka vaitewo zvikanganiso zvakadaro.”—Daniel.
“Kana uri pazera rekuyaruka, zvinoita sekuti vabereki vako ‘vanoda kungoziva zvese zvese nezvisinei navo.’ Asi iye zvino semunhu ati kurei, ndava kuziva chinoita kuti vabereki vadaro. Vanenge vachitoratidza kuti vanokuda.”—James.
“Vabereki vangu havachanyanyi kuda kungoziva zvese zvese zvandinoita, asi vakandibatsirawo kunzwisisa kuti raiva basa ravo kugara vakaisa ziso ravo pandiri. Iye zvino ndayaruka, asi ndichiri kungoda kuti vandibatsire uye vandidzidzise. Kunyange wakura, hapana paungazoti hauchadi kubatsirwa nevabereki vako.”—Makenzie.
“Pandainge ndichiri kuyaruka, mhamha vangu vaigara vachiuya mubhedhurumu mangu, vondibvunza kuti ndaswera sei uye kuti zvinhu zviri kundifambira sei. Panguva iyoyo, ndaiona sekuti vaida kungoziva zvese zvese nezvisinei navo. Asi iye zvino ndava kunyatsoona kuti zvavaiita zvairatidza kuti vaiva nehanya neni chaizvo.”—Lauren.